Gaming Change Persons And Booth Cashiers Job Description / Mabasa And Responsibility Template – JobDescriptionSample.org
musha / Uncategorized / Gaming Change Persons And Booth Cashiers Job Description / Mabasa And Responsibility Template
superadmin Chikumi 28, 2016 Uncategorized 7 Comments 1,377 Views
Exchange mari, zviratidzo, uye Chips nokuti customersA madhora. Chingadai ngaateme kuwana siginicha kuti mutengi pamusoro bhiri uye mibayiro. Zvinogona kuverengwa uye mitero mari rokuchera, kana kushandisa imwe Cubicle ari machine slots nzvimbo uye kupa mari kubhengi kuchinja vanhu kubvira pakutanga Kutama.
Career Unyanzvi Need
Tungamirirwa madhora uye mutero mari rokuchera.
Ramba zvinyorwa zvakakodzera echibvumirano reconciliations, mvumo mhando, uye fiscal exchanges.
Swap chikwereti, uye chips, nokusika chinja kuti vatengi.
Teerera vakundi kuti jackpot wakangwarira mabhero uye dambudziko mibayiro.
Ramba kudzivirira usamo maererano nenheyo.
Dzokerana nokupeta zuva nezuva panzombe isimbe mabhuku.
Workin apo slots-michina inogona kuwanikwa uye tarisa ine kuti basa riri kasino pauriri.
Wana clientsA vakasaina pamusoro pakutengeserana apo payout kupfuura yaipedzerwa ari slots-muchina.
Offer uchitamba mutambo Chips, matikiti kune vanoitisana vamwe vashandi kuti resell, kana kuti vanoitisana, kana zviratidzo.
Sarudza vadzidzi vakanzi zvinowanikwa kana pasiri ipo nokuda kubudikidza nepakunaka pamusoro machipisi.
Vashongedze imwe mari-mubhengi kubva pakutanga mumwe kutamira rokuchinja vanhu.
Tora chikwereti zvikumbiro uye ongorora chikwereti anotaura kupa ongorora-cashing kufarirwa kana kunyange kumisa imba chikwereti nyaya.
Tongai akadai somuenzaniso achibvisa mari mumigwagwa yakawandisa motokari, kugadzira duku slotmachines.
Career Zvinhu Kunokosha
Kuverenga Kunzwisisa-Kuziva akagadzirira mitongo uye mitsara iri magwaro-chokuita basa.
Active Kuteerera-Kupa zvakakwana kuziva chii nevamwe vanhu vanoti, Kuwana nguva kunzwisisa zvinhu kuitwa, vachikumbira nyaya sezvo kwakarurama, uye haana mesmerizing panguva kuti vari zvisingagamuchirwi.
Publishing-On mapepa sezvo rakakodzera zvinodiwa revanhu kutaura zvinobudirira.
Kutaura-Kutaura nevamwe kutaura mashoko zvakanaka.
Science-Kushandisa mhinduro uye mitemo aidzora kugadzirisa matambudziko.
Kufunga kuti dzinonetsa-Kushandisa chikonzero uye zvikonzero kuziva zvakanakira nekuipira zvabuda, chinjana inotsiva kana nzira kuti matambudziko.
Active kutsva mashoko Learning-kunzwisisa kukosha maererano neimwe varipo uye ramangwana zvinetso uye sarudzo.
Kudzidza Pedyo-achisarudza uye kushandisa trainingORinstructional nzira uye kurongedza zvakakodzera kuti mamiriro ezvinhu apo kudzidza kana kudzidzisa pfungwa dziri itsva.
Vachiongorora-Monitoring / Kuwana kubudirira akubvumira, vanhu kuti vari okuwedzera, kana makambani kuti enhancements kana funga remedial matanho.
Social Perceptiveness-Kuziva vamwe’ Maitiro nei vakateerera nekuti zvavanoita uye kunzwisisa.
Kuzvidzora-Kugadzirisa zviito maererano othersI matanho.
Kunyengetedza-uchapupu vamwe kunatsiridza maitiro kana vavo vakachenjera.
Settlement-Kutora vamwe pamwe chete uye vachitsvaka ayananise zvakasiyana.
Achirayiridza-Kudzidzisa vamwe HOWTO kuita danho.
Service zvevhiki-chokwadi achitsvaka mazano kuti vabatsire vanhu.
Advanced Problem-Kugadzirisa-Kuona yemhando dilemmas uye kudzokorora Info kuti kufanana vanoongorora uye kuvaka inotsiva uye kushandisa dambudziko.
Operations Yekuongorora-pokutsvaga anoda uye mhinduro prerequisites kuti pave manyorero.
Technology Design-Technology kushanda mumwe uye achitanga maturusi kana generating zvido.
Tools Selection-Kuona maturusi uye mhando midziyo vaifanira kuita basa.
Yakavamba-kugadzwa midziyo, michina, wiring, kana zvirongwa kuti kazhinji kusangana zvinhu.
Zvirongwa-Writing kombiyuta Mabhokisi zvinangwa zvakasiyana.
Operation Monitoring-Kuona zvokuchunisa, mazano, kana siyana zviratidzo kuitira munhu midziyo kushanda nemazvo.
Kushanda uye Manage-Kutadzisa mashandiro anoita zvinhu kana nehurongwa.
Maintenance-Kuita yokuchengeta kuti purogiramu musi zvinhu uye kusarudza apo uye worudzii yokuchengeta anova anodiwa.
Troubleshooting-Kusarudza zvikonzero anodawo blunders uye kusarudza kuti zvinhu zvofambiswa sei pamusoro zvacho.
Kudzorera-kugadzira mano kana nzira utilizing zvokushandisa kuti vanosungirwa.
Quality Control Kuongorora-Kuita yokuedzwa uye inspections zvinhu, mabasa, kana nzira kuongorora unhu kana kunyatsoshanda.
View uye Decisionmaking-Uchifunga okufananidza mitengo uye zvakanakira nezviito kuti vanogona kusarudza kupfuura rakakodzera mumwe.
Analysis Kuziva chete sei kuvandudza pakaitika, akavhiyiwa, uye zvinhu huchachinja zvaitika uye worudzii unyanzvi anofanira kuita.
Nzira Analysis Kuziva nzira kana zviratidzo maitiro pamwe zvakakodzera kana mabasa aifanira kusimbisa functionality, hama kuti zvinangwa wegadziriro.
Timemanagement-Managing romunhu chiitiko uye vamwe’ nguva.
Operations Mari-Kusarudza sei madhora achaitwa paakapiwa kuwana basa rakapera, uye nekurangarira kuti izvi mari.
Operations yamarudzi Resources-Kuwana uye Paakaziva akananga yakanaka kushandiswa mabasa michina, uye zvinoriumba zvokushandisa zvinodiwa kuita zvikuru basa.
Kushanda Workers Resources-Inokurudzira, dzichiri, uye aiming vanhu sezvo vanoshanda, mukutaura pamusoro vanhu venyu basa.
Education Kukosha Experience Kukosha
Senior High School Degree (kana Ged kana Senior School yokuenzana Certificate)
Asingasviki-kupfuura High School Diploma
Vazhinji School Programs
Basa Management Unyanzvi Kukosha
rusimbiriro – 87.05%
Kushingairira – 87.08%
dzora – 87.27%
ruyamuro – 89.96%
Worry Vamwe – 88.32%
Pressure Houkago – 89.33%
kuvimbika – 93.58%
Kuziva Details – 91.95%
kuvimbika – 88.67%
rusununguko – 84.99%
kubudirira – 86.97%
February 7, 2019 pa 8:11 pm
May 2, 2019 pa 10:05 pm
Pingback: Does Your Resume Scream| | pevhu